24 Otú ọ dị, n’ụbọchị mbụ n’izu, ha ji ihe na-esi ísì ụtọ ha kwadebere gaa n’ili ahụ n’isi isi ụtụtụ.+ 2 Ma ha hụrụ na a kwapụwo nkume ahụ n’ili ncheta ahụ.+ 3 Mgbe ha banyere, ha ahụghị ozu Onyenwe anyị Jizọs.+ 4 Ka ihe a nọ na-agbagwoju ha anya, lee! ndị ikom abụọ ndị yi uwe na-enwu gbaa guzoro ha n’akụkụ.+ 5 Ka ụjọ ji ndị inyom ahụ, ha wee kpudo ihu n’ala, ndị ikom ahụ sịrị ha: “Gịnị mere unu ji na-achọ Onye dị ndụ n’etiti ndị nwụrụ anwụ? 6 [Ọ nọghị ebe a, kama a kpọlitewo ya.]*+ Chetanụ otú o si gwa unu okwu mgbe ọ ka nọ na Galili.+ 7 O kwuru na a ghaghị inyefe Nwa nke mmadụ n’aka ndị mmehie, a ga-akpọgidekwa ya n’osisi, ma n’ụbọchị nke atọ, ọ ga-ebili.”+ 8 Ya mere, ha chetara ihe ndị o kwuru,+ 9 ha wee si n’ili ncheta ahụ laghachi ma kọọrọ mmadụ iri na otu ahụ na ndị ọzọ niile ihe ndị a niile.+ 10 Ha bụ Meri bụ́ Magdalin, na Joana,+ na Meri nne Jems. Ndị inyom+ ndị ọzọ ndị so ha nọkwa na-akọrọ ndịozi ihe ndị a. 11 Otú ọ dị, okwu ndị a dị ha ka ihe nzuzu, ha ekwetaghịkwa+ ihe ndị inyom ahụ kwuru. 12 [Ma Pita biliri, gbara ọsọ gaa n’ili ncheta ahụ, mgbe o hulatara lee anya, ọ hụrụ naanị ákwà ozu. Ya mere, ọ pụwara, na-atụgharị uche n’ihe ahụ merenụ.] 13 Ma, lee! n’ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n’ime ha nọ na-aga otu obodo nta nke dị ihe dị ka maịl asaa site na Jeruselem, ebe a na-akpọ Emeọs. 14 Ha na-ekwurịtakwa n’etiti onwe ha banyere ihe ndị a niile+ merenụ. 15 Ma ka ha na-akparịta ụka ma na-ekwurịta okwu, Jizọs bịaruru nso+ wee soro ha na-aga; 16 ma e mechiri anya ha ka ha ghara ịmata onye ọ bụ.+ 17 O wee sị ha: “Gịnị bụ ihe ndị a unu na-arụ ụka ya ka unu na-aga n’ụzọ?” Ha wee gbarụọ ihu, guzoro otu ebe. 18 Onye aha ya bụ Kliopas wee zaa ya, sị: “Ị̀ bụ onye ọbịa na Jeruselem nke na-enweghị onye ya na ya na-emekọrịta ihe, nke mere na ị maghị ihe ndị mere n’ime ya n’ụbọchị ndị a?” 19 O wee sị ha: “Ihe ndị dị ka gịnị?” Ha wee sị ya: “Ihe mere Jizọs onye Nazaret,+ onye ghọrọ onye amụma+ dị ike n’ọrụ na n’okwu n’ihu Chineke na n’ihu mmadụ niile; 20 nakwa otú ndị isi nchụàjà na ndị na-achị anyị si nyefee ya, e wee ma ya ikpe ọnwụ ma kpọgide ya n’osisi.+ 21 Ma anyị nọ na-enwe olileanya na nwoke a bụ onye a kara aka ịnapụta Izrel;+ e wezụgakwa ihe ndị a niile, nke a bụ ụbọchị nke atọ kemgbe ihe ndị a mere. 22 Ndị inyom+ ụfọdụ, ndị si n’etiti anyị, mekwara ka anyị nwee ihe ijuanya, n’ihi na ha gara n’ili ncheta ahụ n’isi ụtụtụ 23 ma ha ahụghị ozu ya, ha wee bịa na-ekwu na ha hụkwara ihe dị ebube, ya bụ, ndị mmụọ ozi, ndị sịrị na ọ dị ndụ. 24 Ụfọdụ n’ime ndị anyị na ha nọ gakwara n’ili ncheta+ ahụ; ha hụkwara ya otú ahụ, dị nnọọ ka ndị inyom ahụ kwuru, ma ha ahụghị ya.” 25 Ya mere, ọ sịrị ha: “Unu ndị na-amaghị ihe, ndị obi ha na-adịghịkwa ekwere ihe niile ndị amụma kwuru ngwa ngwa!+ 26 Ọ̀ bụ na ọ dịghị mkpa ka ihe ndị a mee Kraịst,+ ka ọ banyekwa n’ebube ya?”+ 27 Ọ kọwaara ha ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ dum banyere onwe ya, malite n’ihe Mozis+ dere ruo n’Akwụkwọ Ndị Amụma+ niile. 28 N’ikpeazụ, ha rutere nso n’obodo nta ahụ ha na-aga, o wee mee ka à ga-asị na ọ ka na-agakwu n’ihu. 29 Ma ha rịọsiri ya ike, sị: “Nọnyere anyị, n’ihi na o ruwela mgbede, ụbọchị agwụwokwa agwụ.” O wee banye n’ụlọ ka ya na ha nọrọ. 30 Mgbe ya na ha nọ na-eri nri, o weere ogbe achịcha, gọzie ya, nyawaa ya ma malite inye ha ya.+ 31 E wee meghee anya ha nke ọma, ha wee mata onye ọ bụ; o wee pụọ n’anya ha ozugbo.+ 32 Ha wee gwa ibe ha, sị: “Ọ̀ bụ na obi ekporoghị anyị ọkụ mgbe ọ nọ na-agwa anyị okwu n’okporo ụzọ, mgbe ọ nọ na-akọwara anyị Akwụkwọ Nsọ nke ọma?” 33 N’oge awa ahụkwa, ha biliri ma laghachi Jeruselem, ha wee hụ mmadụ iri na otu ahụ na ndị ha na ha nọ ka ha zukọtara. 34 Ha wee sị ha: “N’ikwu eziokwu, a kpọlitere Onyenwe anyị, ọ pụtakwara n’ihu Saịmọn!”+ 35 Ha onwe ha kọkwara ihe ndị ahụ mere n’okporo ụzọ na otú ha si mata onye ọ bụ site ná nnyawa ọ nyawara ogbe achịcha ahụ.+ 36 Mgbe ha nọ na-ekwu banyere ihe ndị a, ya onwe ya guzoro n’etiti ha [wee sị ha: “Udo dịrị unu.”] 37 Ma ha chere na ha hụrụ mmụọ, n’ihi na egwu ji ha,+ ụjọ ana-atụkwa ha. 38 O wee sị ha: “Gịnị mere unu ji na-echegbu onwe unu, gịnịkwa mere unu ji na-enwe obi abụọ? 39 Leenụ aka m na ụkwụ m, na ọ bụ mụ onwe m; metụnụ m aka+ ka unu wee hụ, n’ihi na mmụọ adịghị enwe anụ ahụ́ na ọkpụkpụ+ dị nnọọ ka unu na-ahụ na m nwere.” 40 [Mgbe o kwuru ihe a, o gosiri ha aka ya na ụkwụ ya.] 41 Ma mgbe ha na-ekwetabeghị+ n’ihi oké ọṅụ, ma nọrọkwa n’ijuanya, ọ sịrị ha: “Ọ̀ dị ihe unu nwere ebe ahụ unu ga-eri?”+ 42 Ha wee nye ya otu iberibe azụ̀ a mịrị amị;+ 43 o wee nara ya ma taa ya+ n’ihu ha. 44 O wee sị ha: “Okwu ndị a ka m gwara unu mgbe mụ na unu ka nọ,+ na ihe niile e dere n’iwu Mozis na n’Akwụkwọ Ndị Amụma+ na Abụ Ọma+ banyere m aghaghị imezu.” 45 Mgbe ahụ, o mepere obi ha nke ọma ka ha ghọta ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara,+ 46 o wee sị ha: “Otú a ka e dere ya na Kraịst ga-ata ahụhụ ma si n’etiti ndị nwụrụ anwụ bilie n’ụbọchị nke atọ,+ 47 ọ bụkwa n’aha ya ka a ga-ekwusa nchegharị nke na-eme ka a gbaghara mmehie.+ A ga-ekwusa ya ná mba niile+ malite na Jeruselem.+ 48 Unu ga-abụ ndị àmà+ nke ihe ndị a. 49 Ma, lee! ana m ezite ihe ahụ nke Nna m kwere ná nkwa ka ọ bịakwasị unu. Ma, unu onwe unu, nọgidenụ n’obodo a ruo mgbe a ga-eyiwe unu ike si n’elu dị ka uwe.”+ 50 O duuru ha garuo Betani, o wee chịlie aka ya ma gọzie ha.+ 51 Ka ọ nọ na-agọzi ha, e kewapụrụ ya n’ebe ha nọ, e wee malite ibuli ya gaa n’eluigwe.+ 52 Ha wee kpọọrọ ya isiala ma jiri oké ọṅụ laghachi na Jeruselem.+ 53 Ha nọgidekwara n’ụlọ nsọ na-agọzi Chineke.+
^ Lee ihe e dere n’ala ala peeji na Lu 23:34.